Isikhokelo sokubhalwa okuchanekileyo kokuqukethwe kwi-World March
Ikhaya » Isikhokelo sokubhalwa okuchanekileyo kokuqukethwe kwi-World March
1 Izikhokelo zeeNqaku zoKhutshwa kweeNkcazo, iindaba, ukuhanjiswa kweendaba
1.1 Ifomathi yombhalo
1.2 Igama elingundoqo lokubhala umxholo
1.2.1 Ukwazi njani ukuba igama elingundoqo lihlala lisesha?
1.3 Izihloko kunye neeNhloko
1.4 Ukuqhagamshelana namanye amawebhusayithi
1.6 Ividiyo ze-Youtube
1.7 Amanqaku okugqibela
Izikhokelo zeeNqaku zoKhutshwa kweeNkcazo, iindaba, ukuhanjiswa kweendaba
Isicatshulwa kufuneka sibe nefomathi engancinci, oko kukuthi, oku kufuneka kube yinto elula kunqanaba lezinto zokuyila. Oko kukuthi, ungasebenzisi ubukhulu beetekisi ezahlukeneyo. Sebenzisa kuphela ubungakanani besicatshulwa.
Into echanekileyo kukuba isicatshulwa sithwala kuphela:
Bold: ukugqamisa iingongoma ezibalulekileyo
I-Cursive: ubuncinane ubunyanzelekileyo, ukuqeshwa okanye amagama ngolunye ulwimi.
Lists: zinokubalwa okanye zingabalwa. Izintlu ezilula, kunye namanqaku okanye amanani ukusuka kwi-1 phambili.
Ukuphepha: Imizobo ephantsi, imibala yemibhalo, njl. ...
Ukuba umbhalo ubhaliwe kwiLizwi okanye kwi-Google Amadokhumenti, kuyimfuneko ukuyiguqulela kwifomethi ye-HTML ngaphambi kokuyilayisha kwiwebhu. Kule nto kufuneka usebenzise isixhobo esinje: https://word2cleanhtml.com. Ibeka yonke itekisi kwiLizwi okanye kwi-Google Amadokhumenti, kwaye ibuyisela itekisi kwi-HTML. Emva koko i-HTML itekisi ifakwe kwi-WordPress HTML ithebhu yomhleli:
Igama elingundoqo lokubhala umxholo
Oku mhlawumbi kunzima kakhulu kwisikhokelo ukubhala komxholoKungenxa yoko le nto ndiza kuphakamisa into esisiseko kangangoko kunokwenzeka kwaye ukuba yenziwe ngokusemandleni. Igama eliphambili liseti ephakathi kwamagama emi-2 ukuya kwesi-5 amagama aphawuleka kakhulu kwaye liphindaphindwe kaninzi kwinqaku. Umzekelo: ukuba inqaku lithetha malunga noi-human chain eLa Coruña"Ke Le setethi yamazwi e-5 ingaba ngumviwa okhethekileyo wegama eliphambili le nqaku. Ngapha koko "ithamo lomntu" linokwanela kulo mzekelo. Ngokubanzi, eyona nto ilungele ukuba igama eliphambili libe yinto exhaswa ngabantu rhoqo kuGoogle.
Ukwazi njani ukuba igama elingundoqo lihlala lisesha?
Sebenzisa i-Word Tracker ithuluzi: https://www.wordtracker.com/search (kufuneka ifakwe kwi-Territory, eSpain) Ukuba neziphumo, oko kukhangelo ezili-10, kwanele. Ungasebenzisi igama elinqabileyo kakhulu, umzekelo: "uxolo". Ukuba awusakwazi ukusebenzisa i-Wordtracker ngenxa yokuba ugqithile kumda wokukhangela, unokuzama Ubheke phambili.
Ngokufanelekileyo, kufanele ukuba ibe neziphumo, kodwa iziphumo ezibi, phakathi kwe-10 ukuya kwi-500 ziya kulunga. Umzekelo: "imatshi yehlabathi" yanele, ayilunge kakhulu ngenxa yokuba ine-10 kuphela, kodwa yanele:
Kwelinye icala, "uxolo", "uthando", ... lubi kakhulu ngoba linamanani aphezulu kakhulu, ngaphezu kwe 500:
Ndiyazi ukuba ngamanye amaxesha kunzima ukufumana igama elihambelana nale miqathango. Ukuba awufumani into efanelekileyo, akukho nto iyenzekayo.
Injongo kukubeka eli gama elingundoqo ubuncinane amaxesha e-2 kwisicatshulwa ngaphandle kokubala iintloko, okanye amanye amaphulo endiya kuphawula ngawo ngezantsi. Enye yeempendulo zeli gama elingundoqo, kufuneka ube nesibindi.
Izihloko kunye neeNhloko
Inqaku eliphambili (elibonakala nje kwibhokisi elingentla) kufuneka libe ne-50 kunye ne-75. Kwaye kufuneka ufake igama elingundoqo. Yingakho ngokuqhelekileyo yinto efanelekileyo yokukhetha igama elingundoqo, ukhangela isihloko
Kubalulekile ukuba isicatshulwa sinamaxwebhu amaninzi, ubuncinane kwisihloko sezinga le-2 (Isihloko se-2 kwiLizwi). Ngokufanelekileyo, kufuneka ube ne-1 okanye iqela le-2 kunye nabaphathi bezinga le-3.
Kwakhona Kucetyiswa beka i-Subtitle kwicandelo elingezantsi kwesihloko esikhulu esithi "Ngenisa umbhalo ongezantsi apha".
Ubungakanani bombhalo ongaphantsi ungabanzi, ngokuqinisekileyo unama121 kunye ne-156, kuba iya kusebenzisa ingcaciso yeMeta. Kwakhona, Kufuneka kwakhona ufake igama elingundoqo.
Ke ngoko, ukuba sijonga iodolo yabaphetheyo ukuba ngaba sinemiyalelo emithathu
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Iya kuba ayilunganga ngoba i-H4 ihlala ihlala iphakanyiswa ngu-H3
H3 - H2: Iya kuba ayilunganga, ngoba i-H3 ihlala ihlala iphambi kweH2
H3 - H3 - H3: Kuya kuba kubi ngoba kuya kufuneka kubekhona enye H2
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Kungakuhle ngoba ulungelelwaniso lwehistriyali luyahlonitshwa.
Ekugqibeleni, igama elingundoqo kufuneka lihambe, kwi-1 yeziqulatho zeziqulatho (akunandaba nokuba kuCandelo 2 okanye kwisiXhosa 3).
Ukuqhagamshelana namanye amawebhusayithi
Zama ukungasebenzisi izixhumanisi eziphumayo, ngaphandle kwe-2 ngetekisi buninzi, nangona i-1 ingcono kuphela.
Ngaphandle kokuba unxibelelwano lwangaphandle nekhasi elinomdumo omkhulu ** , Uhlobo lwe-Wikipedia, iphephandaba elinamandla okanye into enje, faka kwisikhonkco njengoko NGAPHANDLE kukhetho:
Kubalulekile ukuba zonke iinqununu zidibanise ngenye indlela kwiwebhu. Ukuba akuyi kwenzeka apho, unokuhlala uthabatha ukudibanisa nephepha eliphambili.
Umzekelo: "Okokugqibela Matshi Yehlabathi, sikwazile ukuya… ”
Kwikhonkco langaphakathi, ungafaki i-NOFOLLOW.
** Ukuba awukwazi ukuba unedumela elihle okanye cha, faka https://www.alexa.com/siteinfo kwaye ubeke i-URL yesizinda, umzekelo "namhlanje.es".
Ukuba ukhona ngezantsi kwe100.000 kwi-Global Rank, ngoko akudingeki ukuba ufake i-NOFOLLOW. Kodwa ukuba kunjalo ngasentla, Ewe kufuneka ubeke.
Ngaphambi kokuba ulayishe umfanekiso ugcine engqondweni ezi zinto:
Igama lomfanekiso kufuneka lilula, ngaphandle kwe- “ñ” (tshintsha i-ñ ye-n), ngaphandle kwamabala, kwaye ukuba kukho iindawo, yitshintshe nge-hyphens.
Xa ufaka umfanekiso, kufuneka ugcwalise iSihloko, iMibhalo engezantsi kunye neenkcazo. Unokubeka okufanayo kumacandelo amathathu.
Akukho mfanekiso kufuneka udlule i-1000 px ububanzi.
Kwakhona Kubalulekile ukubeka umfanekiso ofakiwe. Ukuba ubeka umfanekiso kwisicatshulwa, ungasebenzisi umfanekiso ofana neSithombe esiMfanekiso. Kukhethwa ukuba akukho mfanekiso kwisicatshulwa, ukuba akukho mfanekiso obalaseleyo. Kwisihloko, Umbhalo oNgezelelweyo kunye neNkcazo yeSithombe esiPhakathi, kuyimfuneko ukubeka igama elingundoqo.
Ubungakanani obuhle boMfanekiso oPhambili 960 x 540 okanye umlinganiselo we-16: 9. Ububanzi bomfanekiso kufuneka bube phakathi kwe-600px kunye ne-1200px ububanzi.
[su_youtube_advanced = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "ewe" https = "ewe"]
Ukutshintsha nje i-URL, ngokufanayo.
Njengenyaniso enomdla, eli nqaku lizalisekisa zonke iimfuno zokubhalwa kweziqulatho endizichazele apha ziquka imigaqo yokuphenya:
Apha ndilungiselele Uluhlu lwe-PDF lokukhangela kunye nemibandela ebalulekileyo ukuba ungalibali nayiphi na.